လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်း နှင့် China Energy Engineering Co.,Ltd. တို့အကြား ၁၁၉ မဂ္ဂါဝပ် စက်တပ်ဆင်အင်အားရှိ သထုံသဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် စွန့်ပစ်အပူခံသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနာ
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံလျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အစီအစဉ် IDA ​ေချးငွေကို အသုံးပြု၍ မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့တွင် တည်ဆောက်မည့် (၁၁၉) မဂ္ဂါဝပ်သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့နှင့် စွန့်ပစ်အပူသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသော China Energy Engineering Group (CEEC) နှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ရေး အတွက် စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကြောင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်စဉ်များတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း များ ပြုပြင်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ဓာတ်အားလိုင်းအနီး လူ၊ ပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ စက်ကွင်းအတွင်းတွင် ကျရောက်၍ ဓာတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များသည် ပဉ္စမအများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းဟူသော အဓိပ္ပာယ် နှင့် လျှပ်စစ်စက်ကွင်း ဖြစ်ပေါ်မှုကို ပြည်သူအများ သိရှိရန် သိသာထင်ရှားအောင် ရှင်းပြမည် ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းစာမှာ ဆားဗစ်ကြိုးတွေကြောင့် ဓာတ်လိုက်မှုအကြောင်း ဖတ်လိုက်ရတော့ မနှစ်က တို့အိမ့်ရှေ့အိမ်က မိန်းမကြီးတစ်ဦး သစ်ကိုင်းကျိုးကျပြီး ဆားဗစ်ကြိုးလျော့ကျနေတာကို သွားကိုင်မိလို့ ဓာတ်လိုက်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပြန်မြင်လာမိတယ်……နှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ကြိုး ဆိုတော့ ပေါက်ပြဲနေတာကနေ ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်တာ ….. လူတိုင်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အချက် တွေကိုသိရှိပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုကြောင်း မိတ်ဆွေတစ်ဦး ပြောကြားလာပါသည်…..
ဆားဗစ်ကြိုးတွေကြောင့် ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေ တစ်နှစ်ကို အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ….?
Published: Jan 27 Posted Under: Ministry News
လျှပ်စစ်အန္တရာယ် သတိပြုနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြ ပေးခြင်းဖြင့် အများပြည်သူများ လျှပ်စစ်အသိ သတိရှိရန် ဖြစ်ပါသည်။ သတိပြုဖွယ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (၃) ၌ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များတွင် အများဆုံးဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော “ လျှပ်စစ်စီးဝင်နိုင်သော ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းအောက်အနီးတွင် သတိမထားဘဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု” ဖြစ်စဉ်အချို့ကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
သတိပြုဖွယ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ဆောင်ပါးကို ဖတ်မိသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က “လျှပ်စစ်အန္တရာယ်က ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ ခုမှဘဲ သတိပြုမိတယ်ကွ…. ကုရာ နတ္ထိ ဆေးမရှိတဲ့ကွ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်တွေကို ကြိုတင်သိရှိထားတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ မိမိအန္တရာယ်ကင်းနိုင်သလို တခြားသူတွေကိုလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပေါ့ကွာ…..
လူသားတစ်ယောက်၏ ဘဝတာ ကာလတွင် ရေဘေး ၊ မီးဘေး ၊ ရောဂါဘေး ၊ စစ်ဘေး ၊ မြေငလျင်ဘေး စသည့် ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့ရမှုများ ရှိနိုင်သည် ။ အဆိုပါ ဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့ ခံစားရသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းမှု ၊ အသက်ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိကြမည် ဖြစ်ပေသည် ။